Blackberry Chester tsy misy tsininy: Ny karazana varotra sy ny fambolena Agrotechnics - Berry-kolontsaina - 2019
Blackberry Chester tsy misy tsininy: tombony sy tsy fahampian-tsakafo, fambolena sy fiahiana
Ny mpihaza dia namorona karazam-bozaka masira, ny iray amin'izany Ny vary varahina tsy misy balsama Chester Thornless. Mijoro eo anelanelan'ny hafa miaraka amin'ny fanoherana avo lenta mahavariana, ary koa fanandramana tsara. Blackberry Chester Thornless dia nanjary tia ny zaridaina noho ny tsy fisian'ny tsilo sy beza be.
Tsiambaratelo sy tsinin'i Chester Thornless
Planting Blackberry Seedlings Chester Thornless
Fifantenana sy fanomanana ny famolavolana fitaovana
Famaranana sy fiomanana amin'ny tranonkala
Dingana fametrahana ny dingan-dàlana
Ny fiahiana tsara dia ny fanalahidin'ny fijinjana tsara.
Fandroana sy famafàna ny tany
Sakafo mainty hoditra
Fanohanana ny kirihitra
Famaranana sy famolavolana ny kirihitra
Blackberry fanatsarana fomba nataon'i Chester Thornless
Ahoana no fomba hanomanana ny ala maina Chester tsy misy ilana azy amin'ny ririnina?
Chester Thornless famaritana blackberry
Tamin'ny taompolo fitopolo tamin'ny taonjato farany tao amin'ny laboratoara amerikanina tao Maryland, ny varimbazaha mainty Chester Thornless dia nentina. Nipoitra ny karazana vary Darrow (erika) sy Tornfri (semi-dwelling). Vokatr'izany dia nisy tsio-drivotra goavam-be iray sy tamba-java-bozaka natsangana.
Ny jiron'ity karazana blackberry ity dia semi-settling na semi -right, manana loko maivana marevaka, manana flexibilité tsara ary hahatratra metatra telo metatra. Ny bushes - mahery sy mahery. Aorian'ny famolavolan'ny fanangolena, dia maina ny tongolobe. Isaky ny roa taona dia ampitaina tanteraka ny ampahany amin'ny havoana.
Ny ravin'i Chester Thornless dia mivadika ary mandamina amin'ny lamina manaraka. Ny lokony dia maitso maitso. Eo amin'ny fotony no misy ny tsimok'aretina, ary avy eo dia misy tsimok'aretina. Amin'ny lohataona, ny voninkazo fotsy sy mavokely dia miseho avy amin'izy ireo, izay mitambatra amin'ny borosy miaraka amina voankazo matsiro sy be dia be. Izany dia mitranga amin'ny voalohandohan'ny volana Aogositra.
Amin'ny vanim-potoana feno fanamafisana dia lasa mainty ny beza. Ny voankazo tsirairay dia mitombo ho telo santimetatra ary milanja valo eo ho eo.
Blackberry Chester Thornless dia tena mifanaraka amin'ny fitehirizana sy ny fitaterana. Mijoro manohitra ny tantaran'i Tornfri mamy ny tsirony. Ny vokatra azo avy amin'ny sakafo ihany koa dia hohanin'ny voankazo, satria tsara ho an'io tanjona io.
Io karazana rakotra mainty io dia mety ho levona amin'ny olona voan'ny kobam-bary karbovidia, sy ireo izay mijaly noho ny aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny tsinay.
Fantatrao ve? Blackberry noheverina ho toerana nahaterahan'i Etazonia. Any, io ala kely io dia mitombo ao amin'ny trano fialan-tsasatra sy any an-tokontany. Vao tamin'ny taonjato faha-18 no nentina tany Eoropa.
Io tsilo io dia mitombo tsy misy olana ary mitondra voankazo manerana an'i Okraina sy any amin'ny firenena eoropeana hafa. Afaka mandefitra mora foana ireo ririnina mafana sy mafana. Ny fanoheran'ny fanala ny chester Thornless Chester Thornless dia ambony noho ny fiderana rehetra. Any amin'ny faritra manana mari-pana maherin'ny -30 ° C, dia ampy ny maka ny fehezam-panandramana matevina.
Toetran'ny hafanana mangatsiaka.
Faharetan'ny hain-tany tsara noho ny rafitra fakan-danja tena mivoatra, izay tena lalina.
Ny vokatra azo avy amin'ny sakafo.
Ny tsaramaso dia tsy mamoy ny fanolorana azy mandritra ny fitaterana maharitra.
Raha kely ny mari-pana, dia asaina manangona hoditra be dia be, na dia matevina aza ny toetrandro.
Tsy kely loatra ny zavamaniry amin'ny toerana mihidy sy feno henatra. Tsy voatery hamboly azy any amin'ny tany lemaka sy ny lembalemba koa izy io.
Ny fihodinan'ny blackberry shoots dia mitovy amin'ny fihinanan-kena ary roa taona. Amin'ny taona voalohany amin'ny fiainana, ny fitomboany sy ny fiterahany dia mitranga. Amin'ny fanindroany - ny voankazo sy ny fofona hafa.
Blackberry Chester tsy misy ravina aty aoriana ary manomboka amin'ny volana Jona, fa mbola betsaka kokoa izany, satria tsy mipoitra amin'ny lohataona ny voninkazo, ary ny fiterahana ny beans dia isan-taona ary be dia be.
Ny fakan-tsary dia azo alaina amin'ny rafitry ny fakan-tsakafo mihidy, ary amin'ny fisokafana. Ny tena mahazatra dia ny fampiroboroboana ny fakany. Rehefa mividy fitaovana fambolena dia tadiavo ny toetoetran'ny vary - tena manan-danja tokoa ny fambolena sy ny fikarakarana tsara ny kirihitra.
Mamboly fitaovana, izay iray na roa taona monja, amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana ihany. Eo ihany no ahitana ny zavamaniry sy ny zavamaniry ao amin'ny tanimbary izay voamarina sy mavitrika avy amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny fahasamihafana sy ny toe-batana.
Jereo ny zana-ketsa rehefa mividy. Ny jiro dia tsy maintsy misy ravina, tsy simba na maina. Tsy tokony ho hita izy ireo na dia ny marika famantarana ny aretina sy ny fisian'ny bibikely any amin'ny tonta sy ny fakany.
Ny voajanahary tsara indrindra dia apetraka amin'ny fenitra manaraka:
Karazana fototra roa na telo lehibe.
Ny rafitra fototra dia tsy mihoatra ny 15 santimetatra.
Safidy lehibe iray.
Toerana avo latsaky ny 40 santimetatra.
Ny fisafidianana toerana iray hambolena Chester Thornless, manaraka ny endriky ny karazam-bozaka - dia zavamaniry mamiratra be, hany ka ny voa dia ho ny avo indrindra amin'ny solika na amin'ny ampelany.
Raha tsy ampy ny hazavana, dia hihatsara ny tsaram-boakazo mainty ary hamoy ny tsirony. Eo ambanin'izay toe-javatra mitombo izany dia mitombo ny jirom-boaloboka tanora ary manakatona ny sampana mahavokatra amin'ny masoandro. Ny fananganana ny tifitra dia mety hitranga hatramin'ny fararano amin'ny fararano, izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fanamafisana ny aloka.
Chester Thornless dia tsy mandefitra ireo tany tsy voatsodrano, noho izany dia tsy afaka manamboatra azy any amin'ireo faritra tondraka matetika na oram-batra na ranon-drano. Ny Blackberry planting Chester Thornless dia tokony hambolena any an-tanety izay farafahakeliny iray metatra farafaharatsiny. Raha tsy izany, tsy ho tafavoaka velona ilay zavamaniry.
Zava-dehibe izany! Ampio ny kitapo fa tsara indrindra amin'ny tany lava ary tsy mamela ny karbona. Saingy eto dia hiankina amin'ny halehibeny ny trano fonenanao. Azo inoana fa hizara karazana tany samihafa izy io. Amin'ny ankapobeny, ny singa eo amin'ny sehatra rehetra dia tsy maintsy mitovy ary tsy maintsy miova ny tany amin'ny toe-javatra mahazatra indrindra amin'ny fitomboan'ny Chester Thornless.
Mifidy toerana hambolena karazana rakotra alaola ianao, tsy afaka manahy momba ny fiarovana amin'ny rivotra mangatsiaka sy mangatsiaka, satria ny vary Chester Thornless dia karazana ririnina be. Ny tsaramaso dia tsara kokoa nambolena tamin'ireo nosy kely tao afovoan'ny saha, na dia maro aza no mifanohitra amin'izany, mametraka kiraro eny amin'ny vakim-paritra eo amin'ny fefy.
Amin'ity tranga ity, tsara kokoa ny manosika indray metatra hiverina avy eo amin'ny fefy, mba tsy hikorontana ny mainty hoditra, ary mety ho mora kokoa aminao ny maka brydro any aoriana. Ny fahafahana miditra kokoa amin'ny kesika amin'ny andaniny roa dia tsy hanamora ny fijinjana ihany, fa koa ny fikarakarana ny mainty hoditra.
Fantatrao ve? Ny razanay dia nantsoina hoe rakotra "kisendrasendra", satria eo amin'ny tongony dia misy tsilo maranitra be dia be.
Ny famokarana akorandriaka Agrotechnika dia ahitana karazana fototra maromaro. Tsara kokoa ny manomboka mamboly alika amin'ny fiandohan'ny lohataona, na dia afaka manemotra izany ianao hatramin'ny fararano. Amin'io tranga io, ny ampahany ety ambany dia tokony halavaina, ary koa ho voarakitra tsara amin'ny ririnina mba tsy hikoriana ireo jiro tanora ary tsy ho faty ny zavamaniry.
Fa ny fanomanana ny tany dia tokony hatao amin'ny fararano, mba hambolena alikaola amin'ny lohataona. Ny teti-pifidianana voafidy mba hambolena dia tokony ho lavalava farafahakeliny iray metatra ary tokony hanampiana ireo entona mpitrandraka karazam-biby sy zavamaniry.
Ho an'ny 1 m² dia mila manomana 50 g of eau d'eau calcium, 100 g superphosphate et 10 kg compost. Raha toa ny tranokely dia miorina indrindra amin'ny tany tanimanga, ny tavoahangy sy ny fasika dia tokony hampiana izany.
Ny mainty hoditra dia tokony hambolena any anaty lavaka na metatra mirefy 40 cm ³. Tokony hapetraka any amin'ny 50 cm na 1 m eo ho eo izy ireo. Miankina amin'ny fanabeazana hoavy ho avy. Saingy noho ny tsato-kazo goavam-be i Chester Thornless dia ataovy lavalava kokoa. Ao amin'ny tany lonaka, mameno azy amin'ny 2/3.
Raha tsy notanterahana tamin'ny fahavaratra ny fanomanana tany aloha, dia tsy ho tara loatra akory ny hanaovana azy io. Ny fanafody dia mifangaro tsara amin'ny tany ao anaty lavaka mba hampihenana ny fifandraisana amin'ny fotodrafitrasa.
Ampidino ny zana-ketsa ao amin'ny lavaka mba tsy hahalalaka ny halavan'ny ravina varahina, izay eo am-pototry ny loko, ary mihoatra ny 3 cm ny halaliny. Raha manaloka izany ianao, dia mety hampiato ny voankazo mainty mandritra ny herintaona, satria tsy maintsy miandry ny tsimok'aretina vao manakaiky surface.
Zava-dehibe izany! Mba hanamorana ny orana sy ny rano fanondrahana rano, manaova lavaka manodidina ny sotrokely. Mametaka ny tany amin'ny vongan-drivotra madinidinika, mamotipotika ny tavy na tavoahangy. Ataovy izany isaky ny lohataona.
Rehefa mamolavola alaola, dia tadidio fa "manenjika lasibatra" izy io. Mba hisakanana ny zavamaniry tsy hifikitra amin'ny faritra izay tsy natao ho azy, dia aforeto ny tapa-tavoahangy eo amin'ny tady. Tsy natao fotsiny avy amin'ny kolontsaina hafa izany, fa avy amin'ny fefy, satria mety tsy mila "fanafihana" toy izany ny mpiara-monina.
Blackberry dia mitifitra an'i Chester Thornless mitombo ny volony lava sy be volo ary be dia be, hany ka mila zavatra hikolokolo ny kirihitra. Ny zavatra mora indrindra atao eo akaikin'ny tsilo tsirairay dia ny mitaingina boribory sy sampana mifamatotra aminy.
Raha misy landihazo miaraka amin'ny fomba mahazatra, dia hanampy amin'ny fametrahana trollis. Afangaroy eo amin'ny andaniny eo amin'ny sisin'ny lamosina ny andalana maromaro eo anelanelan'izy ireo amin'ny antsasa-metatra toratelo manakaiky ny haavo. Ny tselatra dia mety mifatotra amin'ny solaitrabe na mivadika, mandalo eo anelanelan'izy ireo.
Fantatrao ve? Ny endriky ny mainty hoditra dia angano. Indray andro nisy mpanankarena manan-karena nihaona tamin'ny mpiandry ondry mahantra. Ny fitiavana dia nifanelanelana. Saingy ny sasantsasany izay voalaza fa navela hiala. Nandritra ny fotoana lava, tsy nanadino azy ilay tovovavy satria tsy afaka nanakaiky ny toetrany izy ary nangataka ny natiora mba hanome fahafinaretana ny fiainany mangidy. Ary nomeny jiro iray izy miaraka amin'ny tsirony mahasalama sy manitra.
Blackberry swen Chester Thornless dia mifototra amin'ireto "trozona" manaraka ireto:
Familiana ny tany;
Fitsaboana mialoha sy fitsaboana natao hiadiana amin'ny bibikely sy aretina.
Famaranana sy famoronana kirihitra.
Araka ny hitanao avy etsy ambony, ny fikarakarana an'i Chester Thornless dia dingana mandany fotoana ary mitaky fahaiza-manao manokana. Noho izany, mangataka anao izahay handinika amim-pitandremana ireo torohevitra fanampiny izay omenay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ireo zana-kazo Blackberry izay nokolokao tamin'ity taona ity dia tokony ho rano mangatsiaka mandritra ny 45 andro voalohany ary mandritra ny andro mafana. Mandritra ny fotoam-pamokarana, ny kirihitra dia mila rano, rehefa mitombo ny fitomboany ary mihinana ny voankazo.
Manaova fanasitranana ny tany, aza ampiasaina ny rano amin'ny lavadrano na ny hatsiaka avy amin'ny tapany. Ny safidy tsara indrindra dia ny hanangona ranonorana na rano fisotro anaty vilia lehibe ary avelao hijoro amin'ny masoandro mandritra ny andro maromaro.
Ny famokarana Chester Thornless dia be dia be sy matsiro, tsy maintsy manara-maso ny toetry ny tany eo amin'ilay tranokala. Raha ny roa taona eo anelanelan'ny ala mainty dia mitombo ny fambolena legioma, na ireo mandeha amin'ny fangaronan-drano, amin'ny taona fahatelo dia tokony hajanona eo ambanin'ny vovo mainty ny andalana.
Ny tsimokaretina vao mipoitra dia mila fongana, ary ny tany eo anelanelan'ny andalana dia tokony havela in-dimy isan-tsekoly eo amin'ny 12 cm eo ho eo. Ny manodidina ny kirihitra, ny tany dia tokony hosokafana na hamotsotra amin'ny gidro ho avo 8 heny eo ho eo mandritra ny vanin-taona miposaka.
Zava-dehibe izany! Raha toa ka misy mololo, boribory, rindrina na ravinala any amin'ny ala ny faritra, dia hihena be dia be ny fihenan'ny famerenan-dalana sy ny fomba fanaraha-maso. Ny mulk amin'ny endriky ny dite mirefy dimy santimetatra amin'ny dite matevina na tavoahangy tavoahangy dia hanome fiarovana amin'ny tsimparifary ary hisorohana ny fisian'ny sarety iray eo amin'ny tany. Izy io ihany koa no loharanon'ny karazan-tsakafo feno ho an'ny ala mainty hoditra.
Rehefa ririnina amin'ny fiandohan'ny andro lohataona mafana, dia miha-malemy ny mainty ary mila sakafo manokana. Noho izany, misy fanontaniana manitikitika ny hoe: ahoana ny fomba hanomezana sakafo ny mainty Chester tsy misy tsirony amin'ny lohataona?
Ny nitrate ammonium na ny urea dia ampiharina amin'ny ampahany amin'ny 20 g / m². Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Tokony hamboarina mihoatra ny 40 grama isam-bolana ny sira amin'ny kalazo. Tsy maintsy omena alika maina isan-taona ny solifara solfira, fa ireo izay tsy misy solitany ihany.
Raha natao tamin'ny komposta ny molekioky ny kirihitra, dia tokony hampidirina amin'ny endriky ny dite ny fôsily. Raha misy zavatra organika hafa nampidirina, dia ilaina ny fôsinina amin'ny 50 g / m² isaky ny telo taona.
Zava-dehibe izany! Ny roa na telo taona voalohany taorian'ny nanamboarana an'i Chester Thornless dia tsy tokony ho voaloto.
Raha jerena ny endriky ny saribakoly sy ny fandaniam-potoana fikarakarana azy, sy ny fijinjana, any amin'ny faritra lehibe vertical trellis.
Ny fametrahana rafitra toy izany, dia misy tsanganana roa metatra ny halavany amin'ny halavirana 6-10 metatra avy. Eo anelanelan'izy ireo, ny tady voalohany dia nalaina an-tongotra roa metatra avy teo amin'ny tany, ny faharoa - amin'ny metatra, ny fahatelo - metatra iray metatra, ary ny filaminana farany dia napetraka eo amin'ny tampon'ireo lahatsoratra.
Ny fomba voalohany hanamboarana akorandriaka amin'ny trellis:
Ny tifitra dia mila manilikilika eo anelanelan'ny telolahy telolahy. Ny zavatra rehetra hitombo ao aorian'ilay garazy dia mila mizara amin'ny sisin'ny foitra mainty. Ampidiro izy ireo dia tokony ho eo an-tsefatsefy fahefatra ambony eo an-tampon'ireo tifitra hafa rehetra.
Ny fomba faharoa hanamboarana akorandriaka amin'ny trellis:
Ny Blackberry shoot shoots dia mivelatra ary mamaritra ny endrik'ilay rambony lavaka. Ny zana-tanora faran'izay tsara sy salama dia mifatotra amin'ny tsorakazo ambony indrindra. Tsara izany satria misy toerana malalaka ho an'ny fikolokoloana, nohazavaina tsara kokoa izy ireo, ka noho izany, dia mihamitombo ny fandaniana ny blackberry Chester Thornless. Mariho fa io fomba fanao io dia miasa kokoa kokoa raha oharina amin'ny voalohany.
Ny fomba fahatelo hanamboarana akorandriaka amin'ny trellis:
Ny tifitra misy ny voankazo dia misaraka amin'ny sisin'ny tohotra tanora ary mifamatotra amin'ny tady faharoa na fahatelo, izay mipetraka amin'ny metatra sy ny antsasaky ny tany. Ny tifitra tie dia mila fitaovana malefaka mba tsy hanimba azy ireny, toy ny kiraro na kofehy.
Matetika ny lolo mainty dia tsy mety mijanona amin'ny zaridaina sy ny saham-boankazo. Ny fahadisoan'ny fahazarana amin'ny fambolena maniry aloha. Mihevitra ny mpikaroka fa raha mainam-bozaka ny voankazo, dia midika izany fa efa mety tsara izy ireny. Saingy tsy marina tanteraka izany. Ireo voankazo ireo dia somary mangidy sy maimbo.
Ho an'ny mainty hoditra Chester Thornless dia nahagaga anao tamin'ny zava-tsoa rehetra nananany, tokony hamela azy ireo hikoriana amin'ireo sampana ka hatramin'ny farany. Ho takatrao raha mila mijinja ianao, amin'ny volon'ny hoditra mainty eo amin'ny volon'antsala mainty.
Aorian'ny fijinjana ny fijinjana dia tokony hesorina haingana any amin'ny toerana maizim-pito. Amin'ny masoandro dia minitra vitsy aorian'izay dia mamadika mena ny voankazo, midika izany fa mangidy ny lolom-po ary very ny toetra tsiro rehetra. Ary koa, ny voankazo mainty dia tsy tokony ho voatahiry mandritra ny fotoana lava ~ - izy ireo dia very ny tsirony.
Zava-dehibe izany! Alao ny vokatra rehetra, na dia amin'izao fotoana izao aza. Izany dia hitondra anjara biriky amin'ny voankazo manaraka ny voankazo manaraka etsy sy eroa.
Avy hatrany dia mampitandrina fa ny akorandriaka mena - Tena mampalahelo izany, saingy ilaina amin'ny fivoarana ara-dalàna ny kirihitra. Noho izany dia tokony atao tsy tapaka izany. Ny fotoana voalohany hanapahana an'i Chester Tornless dia mila roa taona taorian'ny fambolena malalaka. Aorian'izay dia mila manaisotra isan-taona ireo hazo fihinam-boa tranainy ianao.
Ankoatra ny zavatra hafa, ny kirihitra dia tokony hokopaina amin'ny lohataona. Avy eo dia tapaka lavitra ny sampana misy voankazo faran'izay matevina. Tokony hatao isan-taona io fandrotsahana io, ka mamela laka dimy mahavokatra ao anaty kirihitra. Ho ampy izany ho an'ny fijinjana mba hahasambatra anao.
Blackberry Chester Thornless dia tsy azo hafanana na rakotra ny ririnina, satria mahavita mihoatra ny 30 degre ambanin'ny zero, izay tsy mahazatra loatra amin'ny toetr'andro. Saingy ny tsilo sisa tavela ho an'ny voankazo dia mila ferana amin'ny fahalavoana. Tokony horaketina mitovy amin'ny lavany eo amin'ny iray metatra sy sasany.
Io fomba fanao io dia matetika ataon'ny zaridaina za-draharaha amin'ny lohataona miaraka amin'ny famatorana ny loha. Mahasoa izany satria heverin'izy ireo ny vokatra ratsy mety hitranga amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina: aretin'ny mainty na ny fahasimbana.
Zava-dehibe izany! Tsy maintsy nesorina tanteraka ireo tsorakazo izay tsy naratra sy nafatratra.
Ny teboka faharoa lehibe amin'ny fikarakarana Blackberry dia ny Chester Thornless. fananganana fotsy. Blackberry ny tariby dia mahery nefa maivana. Izy ireo dia mila manatanteraka ny fanabeazana, manasaraka ny jono avy amin'ny voankazo.
Mba hanomezana ny endrika kanto indrindra, ny endrika telo dia ampiasaina: веерная, канатная и плетение с направлением в одну сторону или в две разнонаправленные стороны.
Tokony hitarika amim-pitandremana tsara ny lahatsary Blackberry tanora. Tsy tokony hitombo ny kirihitra any amin'izay tiany, ka tsy maintsy mitari-dalana sy mivadika avy hatrany. Rehefa tapitra ny vanim-potoana mitranga, dia nesorina ireo tendron-tsoratry ny totozy.
Tamin'ny herintaona ny fitomboana, nitondra tsiranoka i Chester Thornless. Eo amin'ny sehatry ny fizahana dia misy ny fiorenana sy ny endriny hafa amin'ny voankazo. Rehefa avy nipoitra misimisy izy ireo, izay mila alefa any amin'ny sisiny na amin'ny farany ihany koa.
Rehefa voaoty ny vokatra, dia tapaka ny tifitra lehibe, mamela ireo vaovao eo amin'ny toerany. Manala ny tendron-tsisim-bava koa izy ireo. Izany dia mitranga any aoriana any isan-taona.
Fantatrao ve? Misy finoana iray malaza: aorian'ny 29 septambra, dia tsy azo atao ny manangona hoditra, satria mampidi-doza ny fahasalamana. Voalaza fa ny ravin'oliva dia manamarika ny devoly.
Chester Blackberry Chester tsy manambady amin'ny fomba roa:
Hamaky ny tifitra apikaly. Amin'ny alalan'io fomba io, ny tendronana dia misaraka ary navela ho azy manokana amin'ny faran'ny fahavaratra.
Reproduction maitso maitso. Navoaka tamin'ny volana Jolay. Ny tapany ambony amin'ny loko misy renirano iray dia tokony hokapaina ary hapetraka ao anaty vata misy indolylbutyric asidra. Avy eo, iray volana hambolena vilany iray, hametraka fepetra ahazoana tombony ho azy. Rehefa vita ny rafi-karazam-bolo feno tanteraka, dia efa nambolena teo amin'ny tany ny zavamaniry.
Araka ny efa nolazainay, ity karazana mainty hoditra ity dia mandoka tsara ny hafanana. Ary raha toa ka tsy mihoatra ny 30 degre eo amin'ny faritra misy anao izy ireo dia tsy afaka mandray fepetra hialokaloka sy fisisihana ianao. Saingy raha tianao ny hilalao izany na ny hafanana ivelan'ny varavarankely dia tena ilaozanao, inona no fepetra tokony horaisina.
Aorian'ny fisakafoana, esory ny sampany avy eo amin'ny fitoeran-jiro, miorina amin'ny tany ary manarona ravinkazo. Apetraho eo ambonin'ny tampony ny fitaovam-pandrefesana - sarimihetsika plastika, ohatra. Blackberry eo ambany fiarovana dia tsy vyperevaet, noho izany dia azonao ampiasaina amim-pahamalinana ny hay, ny horus, ny dite na ny mololo.
Aza rakotra ny ravinkazo lavo avy amin'ny hazo fihinam-boa, satria afaka miafina aretina isan-karazany, mikiraoba ary mamindra vovobony tsy mety. Ny volom-borona maina, izay nianjera tamin'ny fahalavoana, dia mila asongadina ao anaty pilaminana samihafa ary hodorana.
Ny momba ny fambolena parsley any amin'ny lohataona na any an-trano. Inona no tokony hikarakarana voalohany?
Olana mety ho aretina ao amin'ny bitro sy ny fitsaboana azy ireo
Ny fomba hambolena sy fananganana voatabia voatokana ho an'ny voatabiha
Sarom-behivavy marevaka mitovitovy endrika - Espaniola fotsy
Mamboly kiraro "Vanya wet", mikarakara ny voninkazo ao an-trano
Aostralianina ve ny aviavy ao anaty fasika?
Arahina tsara ny palmie misy anao: toro-hevitra ankapobeny
Inona no fampiasana karoty ho an'ny vatan'ny vehivavy? Aiza no mihatra ny fambolena fototra?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Blackberry Chester tsy misy tsininy: tombony sy tsy fahampian-tsakafo, fambolena sy fiahiana